नेपालमै मनग्यै आम्दानी छ हेभी इक्विप्मेन्ट अपरेटरलाई
| 2016-03-09 Published
वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पमा जनताको उद्धारमा अहोरात्र खट्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई हेभी इक्विप्मेन्ट उपलब्ध गराएर राज्यलाई ठूलो गुन लगाएको छ हेभी इक्विप्मेन्ट व्यवसायी संघले । नेपाल हेभी इक्विप्मेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवर— ‘जो लामो समयदेखि यो व्यवसायमा कार्यरत छन् ।’ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीबाट सम्मान पाइसकेका यिनै हृदयका धनी र राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति ताराबहादुर कुँवरसँग निर्माण मिडियाले गरेको छलफल :
वर्तमान समयमा राज्य पुन निर्माण अभियानमा जुटेको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरु संघबाट महासंघमा पनि गईसक्नुभएको छ । हाल नेपालमा हेभी इक्विप्मेन्ट व्यवसायीको संख्या कति रहेको छ ?
हो, राज्य नै पुनःनिर्माणको अभियानमा होमिएको बेलामा हामी पनि पुनःनिर्माण अभियानमा छौं । हामीले लामो समयदेखि निर्माणकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । गाँस पछिको महत्वपूर्ण क्षेत्र बास भएजस्तै निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । यसका बारेमा हामीमा सचेतना हुन जरुरी छ । हाल नेपालमा हेभी इक्विप्मेन्ट व्यवसायी ५५०० को संख्यामा छन् भने करिब एक हजार हेभी इक्विप्मेन्टको मेन्टिनेन्स गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाल ४५०० हेभी इक्विप्मेन्टले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
महासंघमा जानुभएको छ, महांघका आगामी कार्यक्रम कस्ता छन् ?
हामी भर्खरै संघबाट महासंघमा गएका हौं । महासंघले व्यवसायीका हकहितमा केन्द्रित रहेर कार्य गर्दछ । हालसम्म ३५ जिल्लामा जिल्ला संघ बनिसकेका छन् भने ती जिल्ला संघलाई महासंघमा आबद्ध गराउने कार्यमा हामी केन्द्रित छौं । हालसम्म महासंघमा १४ जिल्ला विधिवत् रुपमा महासंघमा आवध्द भइसकेका छन् । यी जिल्ला संघलाई महासंघमा ल्याउने र आगामी कार्यक्रमका बारेमा योजना तर्जुमा कै क्रममा लागेका छौं ।
हालसम्म ४५०० हेभी इक्विप्मेन्ट व्यवसायी कार्यरत भन्नुभयो । हेभी इक्विप्मेन्ट व्यवसायीले कतिलाई रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ ?
वर्तमान समयलाई नियाल्ने हो भने एक हेभी इक्विप्मेन्ट बराबर ५ जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । यसरी हेर्दा लगभग २३ हजारले यो व्यवसायबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन् ।
यस व्यवसायमा के कस्ता चुनौती रहेका छन् ?
चुनौती त अत्यधिक छ यो व्यवसायमा । हेभी इक्विप्मेन्ट विग्रीएमा त्यसको ७० प्रतिशत स्पेयर पार्टस्मात्र सजिलै उपलब्ध हुन्छ भने बाँकी ३० प्रतिशत सामान पाउन अत्यन्तै कठिन अवस्था हुनुका साथै सीमित व्यक्तिका हातमा मात्र भएकाले मूल्यमा अत्यधिक समस्या पर्ने, बढी मूल्य तिर्नुपर्ने जस्ता समस्या छन् । त्यस्तै यस व्यवसायमा सीपयुक्त मेकानिक्सको पनि अभाव रहेको छ । स्पेयर पाट्र्स र मेकानिक्सको अभावले व्यवसाय दिनप्रति दिन धरासयी हुँदै गइरहेको अवस्था छ ।
नाकाबन्दीले के कति असर गर्यो ?
अन्य व्यवसायमा झैं यो व्यवसायमा पनि नाकाबन्दीको प्रभाव व्यापक नै रह्यो जसले गर्दा समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिएन । काम गर्नका लागि डिजेल, पेट्रोल नभई काम नहुने हँदा काममा अवरोध भएका कारण कर्मचारी पाल्न पनि साह्रै कठिन अवस्था सिर्जना भयो । हालसम्म पनि असर कायमै छ भनेको बेलामा सामान पाइएको छैन । अधिकांश हेभी इक्विप्मेन्ट भारतबाट आयातित भएकै कारणले गर्दा पनि त्यसका सामानको अपर्याप्ततामा काम नहुँदा व्यवसायमा निकै नै असर परेको छ । काम गर्ने क्रममा पनि व्यूरोक्रेसी विदेशी प्रभावबाट संचालित भएको र पी आर धारीहरुले नै दोहोरो फाइदा उठाइरहेको अवस्था हुँदा राष्ट्र दिनप्रति दिन आर्थिक रुपले कमजोर बन्दै गएको छ ।
यस क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई के कस्तो सुविधा प्राप्त हुन्छ त ? नेपालमा रोजगारीको अवस्था छैन भन्दै दिनहुँ १७००÷१८०० सय युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् उनीहरुलाई यस क्षेत्रमा कसरी ल्याउन सकिएला त ?
एकजना अपरेटरकै कुरा गर्ने हो भने पनि मासिक आठदेखि दश हजारसम्म तलबको रुपमा प्राप्त गर्न सक्दछ भने उसलाई दैनिक १००० देखि १५०० सम्म भत्ता दिइन्छ । त्यस्तै खाने बस्ने राम्रो सुविधा हुन्छ । यसरी हेर्दा मासिक ६०००० हजारभन्दा बढी एक जना अपरेटरले नेपालमा नै कमाउन सक्दछ । नेपालमा हेभी इक्विप्मेन्टको कार्य वर्षमा आठ महिना हुन्छ भने बाँकी चार महिना ऊ आफ्नो परिवारसँग रहन सक्छ । नेपालमा काम नसिकी र काम नगरी विदेशमा जाने वित्तिकै पैसा आउँछ भन्ने जस्तो मानसिकताको विकास युवाहरुमा छ । विदेश जानु अघि नेपालमा नै कामको बारेमा दक्ष भएर गए दुःख पनि नहुने र आय आर्जन समेत बढी हुन्छ तर यस व्यवसायमा अपरेटर हुन चाहने युवाले नेपालमा रहेर नै काम गर्दा पनि विदेशको भन्दा बढी रकम आम्दानी गर्दछ भन्ने कुरामा म दाबी गनृ सक्दछु ।
यस्तो आय आर्जन हुने पेशामा लाग्नका लागि तालिम लिनु पर्दा कहाँ गएर तालिम लिने त ? के कति खर्च गर्नुपर्छ ?
नेपालमा कन्स्ट्रक्सन फेडेरेसन नेपाल भन्ने कम्पनी छ । यसले हेभी इक्विप्मेन्टको तालिम दिँदै आइरहेको छ । हालसम्म यसले नेपाल प्रहरीका १२ जना जवानलाई यो तालिम दिइसकेको छ भने अन्य ५० भन्दा बढी जनशक्तिलाई तालिम दिइसकेको छ । ३५ दिनमा सक्षम बन्न सकिने यो तालिमका लागि २५००० तालिम खर्च तिर्नुपर्दछ ।